Qophiin simannaa ABO Finfinneetti muddama uume - BBC News Afaan Oromoo
Qophiin simannaa ABO Finfinneetti muddama uume
13 Fuulbana 2018
Goodayyaa suuraa Gamooleefi daandii nannoo Gullallee irratti alaabaan ABO hedduminaan mul'ata
Komishinarrii Komishinii Poolisii Federaal Zeeynuu Jamaal qophii simaannaa ABO'f Finfinneetti raawwatamaa jiruun walitti bu'iinsa deeggartoota ABO fi dargaggoota magaalaa Finfinnee gidduutti dhalate to'achuuf heera biyyatti hordofee itti gaafatamummaa isaa ni baha jedhan.
Seeraan alummaa gama dargaggoota Finfinnee fi deeggartootni ABO'n raawwatamu poolisiin callisee hin ilaalu, qaamoleen nageenyaa hojii seera kabachisuu ni hojjetaa jedhaniiru.
Dargaggoonni magaalaa Finfinnee deeggartootni ABO alaabaa akka hin dhaabne dhorkanii fi asxaa dhabichaa iddoo dhaabamee buqqisuun socho'uun seeraan ala jedhan. Kana gochuuf aboo waan hin qabneef sochii kana dhaabuu qabuu jedhan.
Yoo rakkoon jiraate qaamolee nageenyaf eeruun rakkoo furuu malee ofiin ejjennoo fudhachuun dogoggoradha jedhaniiru.
Deeggartootni ABO's asxaa addichaa daandii konkolaataa fi pooliwwan elektirikaarra dibuun sirrii waan hin taaneef gocha kanarraa akka of qusatan gorsinee waliigaleerra jedhan.
Walitti bu'iinsa qaamolee lamaan kanaan bakka tokko tokkotti konkolaata cabsuufi dhagaa walitti darbachuun ture jedhaniiru Komishinar Zeeynuun.
Qophiin simannaa taasifamaa jiru hanga heera biyyattii hordofee raawwatameen adeemsicha ni deeggarra jedhani.
Gullalleen kutaalee Finfinnee keessaa waajirrri gidduugaleessaa ABO bakka itti dhaabate tureedha.
ABO biyyaa keessatti socho'uuf murteessu wajjin walqabatee waajirri kun akka deebi'ee banamu ibsameera.
Qophii simannaa kanaa wajjin walqabatee walitti bu'iinsa kutaa magaalaa Gullallee naannoo Paastar jedhamutti uumamen yoo xiqqaate namootni sadi madaa'uu namoonni bakka sana turan BBCtti himaniiru.
Dhalatootni Oromoo adabaabaayii Paastar irratti alaabaa ABO dibuuf wayita jedhanitti walitti bu'iinsichi uumamuusaa shamarreen iddichatti turte BBC'f himteetti.
Odaan Oromoo biratti hiika maalii qaba?
"Alaabaan diimaa magariisa diimaa hin dibamu jedhanii dhagaadhaan nu ari'an" jetti shamarree Samiiraan.
"Namootni kun alaabaa magariisa, keelloo, diimaa malee alaabaa biraa dibuu hin dandeessan nuun jedhan" jetti. Humnootin nageenyaas aara nama boochisu dhukaasaa akka turan namootni BBC'n haasofsiise himaniiru.
Imala deemsa miillaan ABO simachuuf Wallagga irraa Finfinneetti jalqabe
Yaada koree simannaa ABO
Simannaa hooggansa ABO'f mootummaas qaamolee nageenyaa hunda waliin waliigalteerra gahamee akka jiru kan himan itti aanaan dura taa'aa koree simannaa ABOkan ta'an obbo Ibsaa Nagahoo.
Deggaratootni ABO qophii simannaarratti qooda fudhachaa jiran manneen namoota dhunfaa daandiilee konkolaataa asxaa dhaabichaa dibuurraa akka of qusatanis dhaamaniiru.
Qaamolee asxaan addichaa akka hin dhaabanne mormaan waliin rakkoo keessa galuura warreen rakkoo uumuu fedhan poolisiif akka eeran gaafataniiru.
Jiraattootni naannichaas simaannaan kun akkuma simannaa dhaabilee biroof godhame nagaan akka xumuramu gumaacha isaanii akka taasisasan obbo Ibsaan dhaamaniiru.
Aadaa: Odaan Oromoo biratti hiika maalii qaba?
30 Caamsa 2018
Mootummaa fi ABO: ''Gammachuun akka nama macheessu reefun arge''
9 Hagayya 2018
7 Fuulbana 2018
"Barnoota dhiisnee galuun dhamaatii maatii keenyaas gatii dhabsiise"
Haleellaa Al-Shabab tibbanaafi deebii mootummoonni kennan
'Guca isaan qabsiisan ibsachaa seenaa itti fufsiisuun labata ammaarraa eegama'
Biyya Arabaa 'qoricha fedhii saalqunnamtii dubrtii cimsutti' deebiyaa jirtu
Dureessichi beekamaa qorannoon booda abbaa ijoollee isaa sadanii hin ta'iin hafe
Mormiin itti fufus ejjennoon al-Bashir garuu bakkaa hin sossoone
Eenyutu caalaa soba? Dhiiroota moo dubartoota?
Arsenaal moo Cheelsiitu irra aana?